Villa Hargeisa ayaa waxaa ka furmay shirkii wada tashiga mooshinka madaxweynaha – STAR FM SOMALIA
Waxaa goor dhow uu wada hadalada ka furmay Xarunta Guddoonka Sare Baarlamaanka Somaliya (Villa Hargeisa), iyadoona Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya, uu ku dhawaaaqay in shirkaasi uu furan yahay.
Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa wuxuu sheegay in wada hadaladan ay yihiin kuwo lagu xalinayo Mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Jawaari waxa uu rajo badan ka muujiyay in wada hadaladan ay guul ugu soo dhammaan doonaan, lagana gudbi doono caqabadihii ka dhashay Mooshinka.
Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmarke oo maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho, ayaa ka qaybgalaya wada hadalada. Ra’iisal Wasaaraha waxaa soo wakiishay Madaxweynaha in wada hadalada uu ku metelo.
Xildhibaanada Mooshinka soo diyaarisay, ayaa qaarkood ka qaybgelaya wada hadalada, halka qaarka kalana ay gaashaanka ku dhufteen. Xildhibaanada diidan ka qaybgalka wada hadalada waxay ku andacoonayan, in Jawaari uu ku hadaaqayo in wada hadaladan lagu xalinayo Mooshinka, illaa iyo inta uu sidaa aaminsan yahayna aanay ka qaybgeli doonin wada hadaladaasi.
Jawaari waxaa marar badan si xoogan loogu eedeeyay inaanu dhex dhexaad ka ahayn wada hadalada labada dhinac, isla-markaana uu u gurbinayo dhinaca Madaxweynaha, hase ahaatee illaa iyo hadda wax jawaab ah kama bixin eedeymahaasi.
Dr. Axmed Cali Dahir ayaa ayaa jawaab ka bixiyey hadalkii dawlada kenya